အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၉ (အပိုင်း၁) | နတ္ထိ
« အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၈
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၉ (အပိုင်း၂) »
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၉ (အပိုင်း၁)
အတာကူးတဲ့ တန်ခူးလ အခါသမယမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အေးမြကြည်သာစွာဖြင့် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ ရေသဘင် ဆင်ယဉ်နွှဲပြီး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်း….
မင်္ဂလာရှိကြစေဖို့…။ ရာစုဟောင်းများက မင်္ဂလာ နှစ်မျိုး….
ဒေ၀ါနံ ပိယော ပိယဒသိ ရာဇာ ဧ၀ံ အာဟ, အထိ ဇနော ဥစာ’ဝစံ မံဂလံ ကရောတိ, အာဗာဓေသု ၀ါ အာဝါဟ-၀ိဝါဟေသု ၀ါ ပဇောပဒါယေ ၀ါ ပ၀ါသမှိ ၀ါ, ဧတာယေ စ အံနာယေ စ ဧဒိသာယေ ဇနော ဥစာ’၀စံ မံဂလံ ကရောတိ၊ အတြ တု အ၀ကဇနိယော ဗဟူကံ စ ဗဟုဝိဓံ စ ခုဒကံ စ နိလထိယံ စ မံဂလံ ကလောတိ၊ သေ ကဋ၀ိယေ စေ၀ ခေါ မံဂလေ အပ-ဖလကေ စ ခေါ၊ အယံ တု ခေါ မဟာဖလေ မံဂလေ, ယေ ဓံမမံဂလေ၊ အတြ အယံ ဒါသ ဘဋကမှိ သမျာပဋိ ပတိ, ဂုရူနံ အပစိတိ, ပါဏေသု သံယမော, သမဏဗြဟ္မဏာနံ ဒါနံ, ဧသေ စ အံနေ စ ဧတာရိသေ ဓံမမံဂလေ နာမ။
သေ ၀တ၀ိယေ ပိတုနာပိ, ပုတေနပိ, ဘာတိနာပိ, သုဝါမိကေနပိ, မိတသံထုတေန, အာဝ ပဋိဝိသိယေနပိ၊ အယံ သာဓု, ဣဒံ ကဋ၀ိယေ မံဂလေ အာဝတသ အထသ နိဖတိယာ, ‘ဣမံ ကထ‘မိထိ၊ ယေ ဟိ ကေ၀လေ မံဂလေ သံသယိကေ သေ သိယာ ၀ တံ အဌ နိဝဋေယ, သိယာ ပုန နော ဣဟ လောကိကေ စ ၀…သေ၊ အယံ ပုန ဓံမမံဂလေ အကာလိကေ၊ ဟံ စေ ၀ိ တံ အထံ န နိဝဋေတိ ဟိဒ အထံ, ပရတ အနံတံ ပုနံ ပသ၀တိ၊ ဟံ စေ ပုန တံ အထံ နိဝဋေတိ, ဟိဒ တတော ဥဘယေ လဓေ ဟောတိ၊ ဣဟ စ စေ အဌေ ပရတ စ အနံတံ ပုံဥံ ပသ၀တိ တေန ဓံမမံဂလေနေ။
မင်းတကာတို့ ချစ်ကြည် လေးစားအပ်၍့ ပိယဒဿီဟု ၀ှဲ့ချီ-ခပ်နှိပ် အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်၏့ ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံယူ-ရရှိသော အသောက မင်းတြားမြတ်ကြီး ဤသို့ မိန့်မြွက်တော်မူပြီ– ဤလောက၌ အမြတ် အယုတ် မင်္ဂလာစွဲးယူသူ အစားစား ရှိကြ၏။ ထိုသူများသည် အနာရောဂါ ကပ်ငြိရာ, လက်ထပ်ထိမ်းမြားရာ, သားသမီးမွေးဖွားရာ, အရပ်တပါးသို့ ခရီးယာယီ သွားလာရာ, ဤသို့သော အရာအခါကာလများနှင့် ဤနှင့်အလားတူ အခြားသော အရာအခါကာလများ၌ အမြတ်အယုတ်အားဖြင့် အစားစားသော မင်္ဂလာတို့ကို ပြုလုပ်ကြ၏။ အထူးတလည် မှတ်ဖွယ်ကား ဤမင်္ဂလာအစားစားကို ပြုလုပ်ကြရာ၌ အောက်တန်းစား ကျရောက်သည့် (မိန်းမများ, သားသယ်မအေများ, မိုက်မဲးသော) သူများသည် အထူးထူးအပြားပြား များစွာသော သေးသိမ်၍့ အကျိုးမထူးလှသော မင်္ဂလာများကို ပြုလုပ်တတ်ကြလေသည်။
ထိုသို့သော မင်္ဂလာတို့ကား ပြုလုပ်ထိုက်သည်ပင် ဖြစ်စေ, အကျိုးသွား နည်းပါသော မင်္ဂလာတို့သာ ဖြစ်ကုန်၏။ စင်စစ်အားဖြင့် တရားတော်ဆိုင်ရာ သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာတို့သည်သာ အကျိုးစီးပွား ကြီးမားထွန်းကားသော မင်္ဂလာတို့ ဖြစ်ကြကုန်သည်။ ဤမင်္ဂလာမှု ပြုလုပ်ရေး အရပ်ရပ်စကား၌ ဤတရားတော်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာကား ကျေးကျွန်အစေအပါးတို့အပေါ်၌ ကောင်းမွန်ဖြောင့်မှန်စွာ ကျင့်ဆောင်ခြင်း, ဆရာမိဘ ကြီးရင့်သူတို့အား ကျိုးနွံရိုးသေခြင်း, သတ္တ၀ါတို့ကို သတ်ဖြတ် ညှင်းပန်းရေးမှ စောင့်စည်းခြင်း, ရဟန်းပုဏ္ဏား သူတော်သူမြတ်တို့အား လှူဒါန်းပေးကမ်းခြင်း, ဤဆိုခဲ့ပြီးတို့သည်၎င်း, ဤမှတပါး ဤနှင့် အလားတူ အခြားပြုလုပ်ဖွယ် တရားနာခြင်း, တရားဆွေးနွေးခြင်း စသည်တို့သည်၎င်း မင်္ဂလာ မည်ကုန်၏။
ထိုသို့သော မင်္ဂလာတို့ကို အမိအဘ၌၎င်း, သားသမီး၌၎င်း, ညီအစ်ကို မောင်နှမ၌၎င်း, အသျှင်သခင်နှင့် ကျေးကျွန်တို့၌၎င်း, အဆွေခင်ပွန်း ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို၌၎င်း, အိမ်နီးပါးချင်းအထိ၎င်း, အချင်းချင်း ပြုကျင့်ကြသင့်လေသည်။ ဤညွှန်ပြခဲ့သည့် မင်္ဂလာများကား ပစ္စုပ် တမလွန်ကျိုး, ကိုယ့်သူ့ကျိုးအတွက် ကောင်းမွန်လေသဖြင့် ဤသို့သော တရားတော်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာများကို မည်သည့်မင်္ဂလာမှ မည်သည့်အကျိုးထွက်ပေါ်သည်ဟု ထိုထို မင်္ဂလာ၏့ ကိစ္စပြီးစီးသည်တိုင်အောင် ပြုကျင့်လိုက်နာသင့်ကြ၏။ အထူးတလည်မှတ်ဖွယ်ကား, လောကတွင် မင်္ဂလာဟု သမုတ်ကြသမျှ အကြွင်းမဲ့ရှိသမျှ မင်္ဂလာမျိုးတို့မှာ ယုံမှားဖွယ်နှင့်တကွ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ၎င်းတို့သည် ထိုညွှန်ကြား ရည်ဆောင်ချက် အကျိုး မပြီးစီးပဲးသော် ဖြစ်ရာ၏။ စင်စစ်ကား ၎င်းတို့သည် (ပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ, မပြီးစီးသည်ဖြစ်စေ) ဤပစ္စက္ခ လောကီကျိုးအတွက်မျှ ဖြစ်ကြကုန်၏။
ထို့ပြင် ဤတရားတော်ဆိုင်ရာ သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာတို့ကား အခါကာလမလင့် အခွင့်သင့်တိုင်း ကောင်းကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေကုန်လေသည်။ အကယ်၍ ထိုတရားတော်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာသည် ဤပစ္စက္ခဘ၀၌ ခံစားရနိုင်အောင် အကျိုးမပြီး ရှိပြန်စေကာ, တမလွန်လောက ထိုထိုဘ၀၌ အနန္တကောင်းကျိုးကို တိုးပွားကြီးကျယ်စေလေသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပဲး အကယ်စင်စစ် ပစ္စက္ခကျိုးကို ပြီးစီးစေပြန်မူကား, ထိုမင်္ဂလာမှ ပစ္စက္ခတမလွန် ၂တန်သော ကောင်းကျိုးကို ရသည်ဖြစ်၍့ ထိုတရားတော်လာ သုံးဆယ့်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာအတွက် ဤဘ၀မှာလည်း ကောင်းမြတ်၍, နောင်ဘဝမှာလည်း အနန္တကောင်းကျိုး တိုးပွားလေသတည်း။
Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: ‘ People perform various ceremonies. In sickness, at the weddings of sons, the weddings of daughters, the birth of children, departure on journeys on those and other similar occasions people perform many ceremonies. Nay, the womankind perform many, manifold, trivial, and worthless ceremonies. Ceremonies, however, have to be performed, although that kind bears little fruit. This sort, on the other hand, to wit, the ceremonial of piety, bears great fruit. In it are included proper treatment of slaves and “servants, honour to teachers, gentleness towards living creatures, and liberality towards ascetics and Brahmans. These things and others of the same kind are called the Ceremonial of Piety.
Therefore oughtafather, son, brother, master, friend, or comrade, or evenaneighbour to say: “This is excellent, this is the ceremonial to be performed until the attainment of the desired end.”
This I will perform, for the ceremonial of this world is of doubtful efficacy; perchance it may accomplish the desired end, perchance it may not, and it remainsathing of this world. This Ceremonial of Piety, on the contrary, is not temporal; because, even if it fails to attain the desired end in this world, it certainly produces endless merit in the world beyond. If it happens to attain the desired end here, then both gains are assured, namely, in this world the desired end, and in the world beyond endless merit is produced by that Ceremonial of Piety.’
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)
နတ်တို့ချစ်မြတ်နိုးသော ပိယဒသီမင်းကြီး မိန့်တော်မူသည်မှာ–
လူတို့သည် မင်္ဂလာကြီးငယ်တို့ကို ပြုလေ့ရှိကြကုန်၏။ ဖျားနားသောအခါ၊ သားသမီးများကို ထိမ်းမြားသောအခါ၊ သားသမီး ဖွားမြင်သောအခါ၊ ခရီးထွက်ခါနီးအခါ၊ ဤအခါတို့နှင့်၊ အခြား အလားတူ အခါတို့၌၊ လူတို့သည် များစွာသော မင်္ဂလာတို့ကို ပြုလေ့ရှိကြကုန်၏၊ ထိုမှတပါး သားသမီးရှိသော မိန်းမတို့သည်လည်း အထူးထူးအပြားပြား မြောက်မြားလှ၍ သေးနုပ်အကျိုးမဲ့သော မင်္ဂလာတို့ကို ပြုလေ့ရှိကြကုန်သေး၏။
ဤမင်္ဂလာများကို စင်စစ် ပြုအပ်ပါပေ၏။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် အကျိုးမများလှချေ။ တရားမင်္ဂလာသည်သာလျှင် အကယ် အကျိုးများချေ၏။ တရားမင်္ဂလာဆိုသည်မှာ ကျေးကျွန်အစေခံတို့အား ကောင်းစွာ ပြုစုသိမ်းမြန်းခြင်း၊ ဆရာအရှင်တို့အား ရိုသေမြတ်နိုးခြင်း၊ သတ္တ၀ါတို့အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့အား ပေးလှူခြင်းတို့ပေတည်း။ ဤဆိုခဲ့ပြီးသည်တို့နှင့် အခြားအလားတူ (ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း)တို့သည် တရားမင်္ဂလာမည်ကုန်၏။ ထိုမင်္ဂလာအကြောင်းကို အဖသည်၎င်း၊ သားသည်၎င်း၊ ညီအစ်ကိုတို့သည်၎င်း၊ အသျှင်သည်၎င်း၊ မိတ်ဆွေအသိအကျွမ်းသည်၎င်း၊ အိမ်နီးချင်းသည်၎င်း၊ ဤသို့ ပြောဟောသင့်၏။
ဤတရားမင်္ဂလာသည် ကောင်း၏။ ဤတရားမင်္ဂလာကို လိုအပ်သော အကျိုးပြီးမြောက်စိမ့်သောငှာ ဆောင်ရွက်အပ်၏။
မည်သည့်အကျိုးကို အဘယ်သို့ ပြီးမြောက်စေပါသနည်းဆိုသော်၊ ယခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော (လောကီ) မင်္ဂလာတို့သည် လိုရာအကျိုးကို ပြီးမြောက်စေမည်၊ မပြီးမြောက်စေမည်ကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိ၏။ အကျိုးပြီးမြောက်စေကာမူ ဤလောက အဖို့သာလျှင် ဖြစ်၏။ ဤတရားမင်္ဂလာသည်ကား အခါမရွေး အကျိုးပေး၏။ ဤလောက၌ အကျိုးမပေးစေကာမူ တမနွန်လောကက၌ အတိုင်းမသိသော ကုသိုလ်အကျိုးကို ပေး၏။ ဤလောက၌လည်း အကျိုးပြီးမြောက်သော် ဤလောက၏ အကျိုး တမနွန်လောက၏ အတိုင်းမသိသော ကုသိုလ်အကျိုးဟုဆိုအပ်သော အကျိုးနှစ်ပါးစလုံးကိုပင် ဤတရားမင်္ဂလာဖြင့် ရရှိခံစားရချေ၏။
This entry was posted on April 16, 2008 at 1:42 pm and is filed under စာကိုး, သမိုင်း, သင်္ကြန်, အသောကကျောက်စာ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.